Iindaba-Yintoni i-zoom ebonakalayo kunye ne-zoom yedijithali
Kwiimodyuli yekhamera yokusondezakwayeikhamera ye-infrared thermal imaginginkqubo, kukho iindlela ezimbini zokusondeza,ukusondeza okubonakalayokunye nokusondeza idijithali.
Zombini ezi ndlela zinokunceda ekwandiseni izinto ezikude xa kubekwa iliso.I-zoom ye-Optical itshintsha i-angle yembono ngokuhambisa iqela le-lens ngaphakathi kwi-lens, ngelixa i-zoom yedijithali ibamba indawo ye-angle ehambelanayo ye-angle yokujonga emfanekisweni nge-algorithm yesofthiwe, kwaye emva koko yenza i-target ibonakale enkulu ngokusebenzisa i-algorithm ye-interpolation.
Enyanisweni, inkqubo ye-zoom eyenzelwe kakuhle ayiyi kuchaphazela ukucaca komfanekiso emva kokukhulisa.Ngokuchasene noko, kungakhathaliseki ukuba i-zoom yedijithali ibalasele kangakanani, umfanekiso uya kuba mfiliba.I-Optical zoom inokugcina isisombululo sesithuba senkqubo yokucinga, ngelixa ukusondeza kwedijithali kuya kunciphisa isisombululo sesithuba.
Ngomfanekiso wekhusi ongezantsi, sinokuthelekisa umahluko phakathi kwe-zoom ebonakalayo kunye ne-zoom yedijithali.
Lo mzobo ulandelayo ngumzekelo, kwaye umfanekiso wokuqala ubonisiwe kumzobo (umfanekiso wokusondeza optical uthathwe ngu86x 10 ~ 860mm imodyuli yekhamera yokusondeza)
Emva koko, siseta i-Opticalm 4x yokwandisa isondezo kunye nedijithali ye-4x yokwandisa isondezo ngokwahlukileyo ukuze kuthelekiswe.Uthelekiso lwesiphumo somfanekiso lulolu hlobo lulandelayo(cofa umfanekiso ukuze ubone iinkcukacha)
Ke, inkcazo ye-zoom ebonakalayo iya kuba ngcono kakhulu kunezoom yedijithali.
Niniukubala umgama wokubonaye-UAV, indawo yomlilo, umntu, isithuthi kunye nezinye iithagethi, sibala kuphela ubude be-optical focal.
Ixesha lokuposa: Aug-11-2021
imodyuli yekhamera yokusondeza 30x Zoom Camera Mdule Ikhamera yokwandisa ixesha elide Imodyuli yeKhamera yokwandisa iNethiwekhi Ikhamera yobushushu Ikhamera yeMax yeOptical Zoom